အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် Cyberpornography အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာသုခချမ်းသာမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၂၀၁၇) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်
Cyberpornography အသုံးပြုမှုနှင့်လူကြီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းပြီ-ခံ (2017) ၏ profiles
comments: ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုပြီးသား YBOP အားဖြင့် critiqued ထားပြီးတစ်ခုအစောပိုင်းကလေ့လာမှုတစ်ခုထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြစ်ပါသည်: Cyberpornography: အချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်း, ခံစားစွဲ, လိင်စွမ်းရည်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (2016)။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများအစောပိုင်းလေ့လာမှု သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သတင်းပို့နှင့်အတူ, တူညီတဲ့ဘာသာရပ်များပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့် နည်းသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ အဆိုပါလေ့လာမှုအသစ်3ကွဲပြားအုပ်စုများသို့ porn အသုံးပြုသူများအ categorizing ကလှည့်ကွက်ကဆက်ပြောသည်:
အပန်းဖြေ porn အသုံးပြုသူများသည် (75.5%),
အလွန်အမင်းဆင်းရဲမဟုတ်သော-compulsive porn အသုံးပြုသူများသည် (12.7%),
compulsive porn အသုံးပြုသူများသည် (11.8%) ။
အစောပိုင်းလေ့လာမှုနှင့်အညီလက်ရှိလေ့လာမှုအရ“ မဖွယ်မရာညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများ” တွင်နှစ် ဦး စလုံးရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် နည်းသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့် နည်းသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ အစောပိုင်းဝေဖန်မှုရှင်းပြသကဲ့သို့, ဒီတွေ့ရှိချက်နီးပါးသည်အခြားလေ့လာမှုနှင့်အတူကိုက်ညီမှုဖြစ်ပါသည် ယေဘုယျအားသတင်းပို့ထားတဲ့ compulsive porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲပေါ်တွင် နည်းသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့် သာ. ကြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ဘယ်လိုတတျနိုငျသ နောက်ထပ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောခံရ နှစ်ခုလုံး နည်းသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့် နည်းသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု?
အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေအဖြေကိုသုတေသီများ၏တူညီသောအဖွဲ့ကအစောပိုင်းလေ့လာမှုကဲ့သို့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်: ဒီလေ့လာမှုကိုအသုံးပြု ASEX စံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုတိုင်းတာမဟုတ်, ရန် IIEF. ASEX သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (ပုံမှန်အားဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ညစ်ညမ်းသောပုံနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း) နှင့်လက်တွဲဖော်ပြုသည့်လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်းကိုမခွဲခြားထားပါ။ အဆိုပါ IIEF နေစဉ် သာ လိင်တက်ကြွဘာသာရပ်များအတွက်။ ပုံမှန်အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖွံ့ဖြိုးစေသောညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများကဲ့သို့ ပူးပေါင်းလိင်စဉ်အတွင်းသူတို့ကိုတွေ့ကြုံခံစား, ဒီသုတေသနလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်အတွက်အခြေခံအားဖြင့်အသုံးမကျဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာရပ်အတော်များများသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကညစ်ညမ်းမှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေစဉ်တွင်သူတို့၏အော်ဂဇင်၊ နှိုးဆွမှုနှင့်စိုက်ထူမှုအရည်အသွေးကိုအဆင့်သတ်မှတ်ကြသည်။ ထပ်မံ၍ လည်းအများစုသည်မရေမတွက်နိုင်အောင်အသစ်အဆန်းများနှင့်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပိုမိုအစွန်းရောက်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ယနေ့ခေတ်လေးလံသော porn အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကို screen-based arousal ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ လူမဟုတ်ပါ။
အဆိုပါ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အများအားဖြင့်ယောက်ျားတို့ Partners လိင်ရှောင်ကြဉ်အဖြစ်လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်ထောက်ပံ့ပေးအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်အမှန်တကယ်ကဒီအယူအဆထောက်ခံပါတယ်:
"ဒီတစ် ဦး ချင်းစီမှတင်ပြသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကသူတို့၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပုံသဏ္intoာန်ဖြင့်ပုံသွင်းသည်ဟုဆိုသည်တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction က၏ရှောင်ရှားခြင်းလည်းပါဝင်သည်ကြောင်း ompulsive လိင်။ "
ထို့အပြင်မလိုမုန်းတီးသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူ ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းသာမိတ်ဖက်များရှိသည်။ (မှတ်ချက်။ ၃၈% သည်မိတ်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံသည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ အကြောင်းမှာညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏လက္ခဏာများမှာတွဲဖက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်အပြာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ) မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုအဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူအနည်းဆုံး ၆၂% သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများဖြစ်သည် သူကတကယ့်လူတွေနဲ့လိင်မဆက်ဆံဘူး။ ဤနှစ်ခုလေ့လာမှုများအတွက် compulsive porn သုံးစွဲသူအများစုသည်၎င်းတို့၏ arousal နဲ့စိုက်ထူအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုလိုသည် porn မှ masturbating စဉ်မဟုတျဘဲတနာတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်။ ထို့ကြောင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းသုတေသီသာပူးပေါင်းလိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြေဆိုနိုင်သူကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုမေးမွနျးခဲ့မယ်ဆိုရင်ထက်ဝေးအနိမ့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရတော့မှာပါ။
ညစ်ညမ်းတစ်ကိုယ်တော်အသုံးပြုသောယောက်ျားများစွာသည်လက်တွဲဖော်လိင်ဆက်ဆံစဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသည်ကိုမသိကြပါ။ ၎င်းတို့သည်မကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့တွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောမြင့်မားသော libidos များရှိသည်ဟုယုံကြည်ကာမိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ရသောအခါ“ အဆင်မပြေပါ။ ” အင်တာနက်ပေါ်မှလွှင့်ထုတ်သောအင်တာနက်မှတဆင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏နှုန်းထားများခုန်တက်ခဲ့ကြ ယောက်ျား၌၎င်း, ပြဿနာ porn အသုံးပြုသူများသည်အကြား, (မိတ်ဖက်နှင့်အတူ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏နှုန်းထားများများမှာ 71% သကဲ့သို့မြင့်မားသော! ဤစာတမ်းတွင်အကြောင်းပြချက်မှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းနေခြင်းမဟုတ်ဘဲလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စွာမောင်းနှင်စေသည့်“ မလုပ်မနေရ” ၏အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ (စွဲသူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့၏စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများကိုအခြားလုပ်ဆောင်မှုများထက် ပို၍ နှစ်သက်ကြသည်။ )
တစ်ကိုယ်တော်ညစ်ညမ်းသူများအသုံးပြုသူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာခြင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ သုတေသီများက IIEF ကိုသုံးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုလေ့လာမှုများနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ရလဒ်ထွက်ပေါ်သည်ကိုမဆိုသုတေသီများကမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့အသုံးပြုသော ASEX သည်ပန်းသီးများ၊ IIEF မှလိမ္မော်သီးများကိုတိုင်းတာသည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုစဉ်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ ယနေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုလိင်တူချစ်သူများအနေဖြင့်ပထမဆုံးပေါ်ပေါက်စေသည်။
အနှစ်ချုပ်: သာ. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုများပိုင်ထိုက်သောရလဒျမြားနှငျ့သေးလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနီးပါးဆက်ဆက်သုတေသီ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုတိုင်းတာရန်မှားတူရိယာကိုသုံး, ထို့ကြောင့်လိင်ပူးပေါင်းဘဲနကွေသောဘာသာရပ်များအများကြီးပါဝင်သည်ဟူသောအချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါအကျိုးဆက်အဖြစ်ကလက်ခံကောက်ချက်ဆွဲငင်။
J ကိုလိင် Med ။ 2017 Jan;14(1):78-85. doi: 10.1016/j.jsxm.2016.10.016.
cyberpornography အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များကိုရည်မှတ်တွေ့ရှိချက်ရောနှောနေကြသော်လည်း, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအွန်လိုင်းကြည့်ရှုတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးတိုးပွားလာတစ်ဘုံလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာသည်။
အချိန်ဖြုန်းတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းပုံစံသုံးမျိုးကွဲပြား profile များကို (အပန်းဖြေမှာ-အန္တရာယ်နှင့် compulsive) ကြည့်ရှုကြောင်းအကြံပြုတဲ့သီအိုရီနှင့်ဆေးခန်းအခြေစိုက်မော်ဒယ်ဆန်းစစ်နေဖြင့် cyberpornography-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များအတွက်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်ဤ profile များကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ရန် သုခချမ်းသာ, လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလူ့အခြေအနေတွင်။
ပစ္စုပ္ပန်စပျစ်သီးပြွတ်-သရုပ်ခွဲလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု, compulsive, ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပါအဝင် cyberpornography အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ၏အွန်လိုင်း Self-အစီရင်ခံတိုင်းတာပြီးစီးတဲ့သူ 830 အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးအဆင်ပြေနမူနာအသုံးပြုကောက်ယူခဲ့သည်။
cyberpornography အသုံးပြုမှု dimensions အဆိုပါဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းတိုင်းတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှောင်ရှား Subscale နှင့်, အရီဇိုးနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများစကေးပါဝင်သည်။
Non-compulsive အလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေအပန်းဖြေ (75.5%), (12.7%), နဲ့အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော (11.8%): စပျစ်သီးပြွတ်ညွှန်သုံးခုကွဲပြား profile များကိုလေ့လာဆန်းစစ်။ တစ်ဦး compulsive ပရိုဖိုင်းနှင့်အတူအသုံးပြုသူများအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အဆင့်မြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်ရှောင်ရှားတင်ပြသော်လည်းအပန်းဖြေသုံးစွဲသူများပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ မြင့်မားဒုက္ခရောက်နေလျော့နည်းတက်ကြွအသုံးပြုသူများကိုလိင်လျော့နည်းကျေနပ်မှုတို့လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ တိုက်ပိတ်အသုံးပြုသူများအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေလျော့နည်းတက်ကြွပရိုဖိုင်းအတွက်ဖြစ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်တို့လူတို့သညျ compulsive ပရိုဖိုင်းအတွက်ဖြစ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ခဲ့ကြသည်သော်လည်းအမျိုးသမီးများနှင့် dyadic အသုံးပြုသူတစ်ဦးကပိုကြီးတဲ့အချိုးအစား, အပန်းဖြေအသုံးပြုသူများသည်သူတို့တွင်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရလဒ်တွေကိုဒီပုံစံအပန်းဖြေခြင်းနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော profile များကို၏တည်ရှိမှုအတည်ပြုဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဦးအထူးသဖြင့်တက်ကြွမအရေးကြီးသောအဖွဲ့ခွဲ, သေးအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေစားသုံးသူ၏တည်ရှိမှုပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ Cyberpornography အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ခွဲတိကျတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များနှင့်ဆက်နွယ်သောတစ်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောလူဦးရေကိုကိုယ်စားပြုသည်။
Key ကိုစကား: Cyberpornography, ပရိုဖိုင်းကိုသုံးသပ်ခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းပြီ-ခံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်